I-FromLinux WordPress theme ikhishwe | Kusuka kuLinux
I-SinceLinux WordPress theme ikhishwe
Namuhla ngikulethela isiqeshana sezindaba esizojabulisa abasebenzisi abaningi abasibhalele okuningi ngeposi noma ngamazwana afanayo kubhulogi lethu: Manje isiyatholakala ukulanda isihloko WordPress lokho esikusebenzisayo KusukaLinux.
Kunqunywe ukukhipha ingqikithi yamanje, ngoba vele sisebenza kusifanekiso esisha esizosisebenzisa KusukaLinux, futhi-ke kungani ungahlanganyeli?
Isinyathelo sokuqala sale nkululeko senziwa ISITOLO (Iqembu Labasebenzisi Be-Free Technologies), esibanikeze isihloko se-blog yabo ukuthi basekele ngale ndlela inqubo yokufuduka eCuba. Ku- ISITOLO Okunye ukulungiswa kwenziwe ngemibala nokunye, njengoba sibona esithombeni esilandelayo.
Itimu yokuqala ye- KusukaLinux yaklanywa yimina futhi yahlelwa ngumngane wethu U-Alain Turiño (aka alaintm). Inezinketho ezithile "ezingeziwe", njengokuthuthuka okunikezwe yi- KZKG ^ Gaara ku-plugin Umenzeli womsebenzisi yamazwana.
Le ngqikithi yadalwa kusuka ku-Scratch, futhi ivumelaniswa nezidingo zethu, ngakho-ke kuyanconywa ngaphambi kokuyisebenzisa, yenza uchungechunge lwezinguquko, ezichazwe kufayela README okuphakathi kwetarball.
Ungalanda i-tarball kusuka lapha:
Landa i-DLinux Theme
Ingqikimba isatshalaliswa ngaphansi kwelayisense le-CC (BY-NC-SA). Ngaphakathi kwefayela le-tarball banekhophi yalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » I-SinceLinux WordPress theme ikhishwe
UJuan Ignacio kusho
Ngiyasangana ngiyabonga kakhulu. Kuyisenzo esihle kakhulu engxenyeni yakho, ngiyayithanda le ndaba!
Phendula uJuan Ignacio
Ngokombono wami nefilosofi yami, ukwabelana ngendikimba esakhiwe yithina lapho indikimba entsha yebhulogi isiqalile ukwakhiwa, kuyindlela yokunikela emphakathini futhi kube ngcono naleyo yezwe lethu, yize ihlale yamukelekile isikweletu sento ethile eyenziwe ngesikhathi samahora amaningi nangomzamo omkhulu kangaka, ngethemba nje ukuthi izosetshenziswa yibo bonke abavikela futhi basebenzise iSoftware yamahhala.
Siyabonga futhi ngomzamo wokuthuthukisa itimu ye-alaintm, umsebenzi omuhle.
Ukuqashelwa kuyaziswa futhi ikakhulukazi uma kuvela emphakathini olandela le bhulogi.
Ukuhalalisela kwami ​​okuqotho ngokunikela ngalesi sihloko esihle emphakathini, nginesiqiniseko sokuthi abangaphezu koyedwa bazokuthola kuwusizo.
Ngiyabonga kakhulu bese uqhubeka.
Ukunikela njalo kuyanelisa !! 😀
Manje sengingaqala ukuyifunda ... xD
Kungakuhle uma beyifaka ku-github 🙂
Lowo umqondo .. kufanele ngifunde ukuthi ngikwenze kanjani ..
Udala umsebenzisi wakho, udale i-repo entsha, uyilayishe, wengeze amafayela ku-repo, uzibophezele, u-Push, wakhe umaki «1.0», Phusha…
Konke lokho kusuka kusixhumi esibonakalayo sewebhu?
Ngicabanga ukuthi ivela esigungwini
Kuhle kakhulu impela. Ngikuhalalisela ngomsebenzi omuhle owuthumele!
Ake sibheke ukuthi ngabe ngelinye ilanga ngikhuthazwa yini ukuthi ngenze ibhulogi yokukhuthaza i-PCLinuxOS, le timu izokuba yindlela yokuqala 🙂
Lapho i-vlc idlala izingcezu eziyi-10 ze-mkv ku-pclinux os, noma ifaka i-mplayer 2 noma okungenani ivuselele i-1 kaningi, yithuthukise.
Unganginika isixhumanisi sevidiyo yalabo othi ngibone ukuthi yini inkinga ???
Dala izingqikithi zesitayela: 3
izindaba ezinhle kakhulu, ngifisa ukwazi ukuthi yimaphi amathuluzi abewasebenzisile ukuklama ingqikithi, yize kunyaweni isikhombisa ukuthi yenziwa ngobuchwepheshe buni.Ngingathanda ukwazi ukuthi basebenzise ini engxenyeni yokuklama, uma basebenzise i-gimp noma i-inkscape noma enye isoftware yokwenza izinto noma Kunoma ikuphi, uma bekwenzile ukundiza ngokuzama nangephutha, ngisho ngoba iningi lethu lisebenzisa amathuluzi we-adobe afana ne-photoshop noma iziqhumane ukudala imiklamo ngoba kungashiwo ukuthi yizinga lomkhakha futhi ngingathanda ukwazi ezinye izindlela umhlaba wesoftware wamahhala
Konke esikwenzayo (Design and Programming) kumayelana ne-Free Technologies .. Ngisebenzisa i-Inkscape (ukuklama nokwenza ama-mockups) ne-GIMP (ukuhlela izithombe uma kunesidingo)… 🙂
Kuhle, ngicabanga ukuthi ngizoyisebenzisela i-nomowi, kanye nenguqulo eguqulwe KAKHULU ezinyangeni ezimbalwa selokhu ngine-blog yami: 3
Ngiyabonga futhi ngegalelo lakho 😀
Siyakuhalalisela futhi ngiyabonga kakhulu ngokwabelana ngomklamo we-DesdeLinux nomphakathi, ngiyaqiniseka, futhi njengoba imibono yokuqala isho, lesi sihloko sizosiza kakhulu kulabo abanayo noma abahlela ukuvula ibhulogi entsha. Umnikelo omkhulu !.
Angifuni ukucasula noma yini, kepha kungani ungadedeli ngaphansi kwelayisense yamahhala? Vele ngiyasihlonipha isinqumo sakho kanye nelayisense oyinikezayo. khetha, kepha uma ngingenakusebenzisa ukuthengisa ngakho-ke akumahhala futhi le yibhulogi yeFree Software, ngakho ...
Kodwa ngiyaphinda ngithi, umbhali ngamunye unezinqumo zakhe futhi kumele bahlonishwe.
Hmm, iyiphi inkinga oyitholayo ngelayisense le-CC (BY-NC-SA)? Ukwazi nje 😕
Nami ngoba angazi ukuthi ngiyisebenzisa kanjani. Inkinga ukuthi le layisense iyakwenqabela ukusetshenziswa kwezentengiselwano, ngakho-ke uma ibhulogi enezikhangiso isebenzisa ingqikithi izobe yephula ilayisense. Ngiyabingelela Elav, ngiyethemba ukuthi awuyithathi ngendlela engafanele, okwami ​​ukuphawula okwakhayo.
Siyabonga ngokwabelana nge-elav 😉
ULuis Alfredo kusho
Ungu # Elav omuhle kakhulu, ngiyabonga kakhulu ngokwabelana.
Ungumnikelo omuhle kwisoftware yamahhala.
Lapho ngizama ukufaka ngithola lo mlayezo:
Iphakheji ayikwazanga ukucindezelwa. Isitayela sesitayela.css asiqukethe unhlokweni ovumelekile.
Ukufakwa kwetimu kwehlulekile.
Hmm .. kunengqondo, sikuphuthele lokho .. Inkinga ukuthi izingqikithi ze-WordPress zinemininingwane ethile ekuqaleni kwephepha lesitayela esingazange silibeke .. kepha uma ukopisha ngesandla ifolda yetimu ku-wp-content / izingqikithi / kufanele zisebenze ..
Kodwa-ke, kufanele ngikubuyekeze lokho, imininingwane okufanele ivele yinto enjengale:
/ * Igama Lengqikithi: I-DLinux Theme URI: https://blog.desdelinux.net Umbhali: I-DesdeLinux Team Author URI: https://blog.desdelinux.net Incazelo: I-DLinux version 2.0, i-WordPress theme yeDesdeLinux.net License: Ama-CC () Amathegi: ukukhanya, okumhlophe, okuluhlaza okwesibhakabhaka, i-desdelinux, amakholomu amabili, ibha eseceleni lesokudla, izingqikithi zemibhalo yangokwezifiso: I-DLinux * /
Thatha imininingwane onginike yona bese uyinamathisela kunhlokweni wefayela le-style.css bese ulifaka ngaphandle kwenkinga.
P.S. Uma nje ngihamba kahle ngaphakathi kwesihloko, kungenzeka ukuthi ngikukhathaze kancane.
Into eyodwa nje. Yini okufanele uyenze ukubeka okuthunyelwe phezulu njengoba kufakiwe?
Ngizamile ukungeza kuthegi efakiwe kepha hhayi 🙁
Kufanele wakhe isigaba esibizwa ngokuthi Kunconyiwe 😀
Umnikelo omuhle kakhulu kepha ngike ngazama ukuwusebenzisa futhi uhlala uphuma ngaphandle kwezitayela ezicabalele, ungeza imigqa eshidini lesitayela, ngabe lokhu kuyasombulula?
Igama Lengqikithi: DLinux
Ingqikithi ye-URI: https://blog.desdelinux.net
Umbhali: Ithimba leLinux
Umbhali URI: https://blog.desdelinux.net
Incazelo: I-Version 2.0 ye-DLinux, i-WordPress theme ye-FromLinux.net
Ilayisense: CC ()
Amathegi: ukukhanya, okumhlophe, okuluhlaza okwesibhakabhaka, i-desdelinux, amakholomu amabili, ibha eseceleni lesokudla, izingqikithi zenkambiso
Isizinda Sombhalo: DLinux
Ngabe wenze konke engikufake kufayela le-README? Ngoba kuzwakala unenkinga ngemizila .. ..
URené Sandoval kusho
Ngiyifakile kepha ayiliboni ifayili lesitayela, ngicabanga, livela kimi ngaphandle kwanoma yisiphi isitayela esilula, ukube bekuyi-HTML elula, ungangisiza?
Phendula uRené Sandoval
Nick palomino kusho
Kuhle ... umnikelo kwi-Free Software Community ubongwa kakhulu.
Ikakhulukazi esihlokweni semfundo, ngoba sisinikeza indawo yokuthi siyifunde futhi sifunde okuningi kuyo.
I-PS: Ngiyethemba ukuthi Umenzeli Womsebenzisi uyayibona i-distro yami: D!
Phendula uNick Palomino
Ngabe ukhona owaziyo ukuthi kwenzekani kimi?
Ikhipha iphakethe ...
Iphakheji ayikwazanga ukufakwa. Isitayela sesitayela.css asiqukethe unhlokweni wetimu ovumelekile.
Ukufakwa kwetimu kwehlulekile
Ngikuchazile kumazwana angenhla. Kodwa-ke, izolo ngilayishe inguqulo okufanele ilungise leli phutha .. Uyilande nini ingqikithi?
Ngayilanda ngosuku owathumela ngalo. Kulungiswe nge-update!
elav, ingqikithi yokushintsha imibala?
Iyiphi ingxenye yekhodi okufanele uyidlale?
Angazi noma ngabe ngibhale kahle imibono eyedlule, bengifuna ukukubuza ukuthi ngabe le template entsha izokhishwa yini .. noma ngingahle ngiyithole kanjani .. Ukubingelela okuvela eMadrid
Yebo, kepha ngesikhathi esifanele 😉
Nginombuzo, ungayenza kanjani isebenze i- Izihloko ezihlobene: Hhayi-ke angiboni ukuthi ngikwenze kanjani
ngiyabonga ngomnikelo =). Ngiwuthanda kakhulu umklamo, ngizozama
Bekungimi ngedwa onenkinga nge-sidebar.php? inginika "Iphutha lokuhlwaya: iphutha le-syntax, ukuphela okungalindelekile kwe- $ ku /home/tottemoani/public_html/wp-content/themes/dlinux/sidebar.php kulayini 150"
Sawubona! Ngibonga kakhulu kusengaphambili ngomnikelo wakho.
Nginenkinga, ngemuva kokwenza ngokuphelele zonke izinyathelo ezikhonjiswe kumiyalo, ingqikithi ihlala njengamathambo ngaphandle kwesitayela noma yini ...
Ngenze ukulayishwa njenge .zip, futhi ngifolda nge-ftp kumsingathi kodwa kusaphuma kanjena.
Sawubona .. umbuzo .. isifanekiso esisha ngeke sikhishwe ???
Sawubona, ungaba nomusa kangaka ukulungisa isixhumanisi sokulanda sicela, ngifuna lesi sihloko: 3
Sawubona, isixhumanisi sokulanda asisasebenzi.
Isixhumanisi sokulanda asisasebenzi, ungaphinde usilungise futhi
Isimo se-GNU / Linux Multimedia distros